Wasiirka Maaliyadda XFS oo heshiis lagu bixinayo mushaarka Ciidamada Xooga la saxiixday dowladda Imaaraatka Carabta |
Sifooyinka dadka guuleysta
Hibo Ciise, March 3, 2016
Tuke Somalism — October 17, 2015
Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Aden Farketi ayaa maanta heshiis ay dowladda Imaaradku ay ku bixinayso mushaarka ciidamada kula saxiixday Safiika Soomaaliya u qaabilsan Dowladda Emiratka Amb. Mohammed Ahmed Othman Al Hammadi.
Sidoo kale, Safiirka Soomaaliya u qaabilsan Dowladda Isutaga Emiraadka Carabta ayaa dhankiisa sheegay in xariirka u dhaxeeya labada dal uu yahay mid aad u xoogan, sidaas daraadeedna aan go’aansanay saarayno inaan dowladda ka caawino bixinta mushaaradka ciidamadda, taas oo qayb ka ah mashaaricda aan ugu tala galnay inaan kor ugu qaadno tasiilaadka dowladu u baahan tahay. Wasiirka Maaliyada ayaa dhankiisa sheegay in dhibaatooyinka dhaqaale ee dalka soo food saaray ay sabab u noqotay in ay daahaan mushaaraadka ciidamadda. Taas oo loo aanayn karo miisaaniyadda 2015-ka oo dib u dhac ku yimid qaybtii ay ku kabi jireen deeq bixiyayaaha caalamka.
“Waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta la saxiixdo heshiis lagu bixinayo mushaaraadka ciidamadda Safiirka Dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta Amb. Mohammed Ahmed Othman Al Hammadi oo runtii markast u taagan sidii loo markasta garab taagaan dowladda Soomaaliya. Xaqiiqdii bixinta mushaaradka ciidanku wuxuu naga yaraynayaa culayskii xaga dhaqaalaha ee naga haystay dhanka musharaadka, waxaana dadaal u galaynaa inaan dhaqso u bixino dhamaan mushaaradkii ka daahay ciidamada” ayuu wasiir Fargeeti. Ugu danabyntii Wasiirka ayaa sheegay inuu uga mahadclinayo ciidamada qalabka sida adkaysiga ay muujiyeen, hada ka dibna ay joogto u heli doonaan mushaarodkooda iyo dhamaan xuquuqaha ay leeyihiin.
Next post Critical factors to be considered in Somalia’s 2016 election
Previous post Luuqadaha Dunida & Af-soomaaligii